Dil ka dhacay magaalada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO (Keydmedia) - Kooxo hubaysan ayaa Xalay Nin Rayid ahaa waxa ay ku toogteen Xaafadda Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir.
Qofka la dilay oo ahaa Wiil Dhalinyaro ah ayaa waxa Kooxaha hubaysan ay ku toogteen Degmada Shibis ee magaalada Muqdisho xili uu ku sugnaa meel aan ka fogeen Masjid lagu magacaabo Jaamac oo ku yaalla degmadaasi Salaadii Maqrib kadib.
Haweeney ku sugan Degmada ayaa u xaqiijisay Keydmedia in Geerida Wiilkaasi, waxaana ay sheegtay in uu ahaa Wiil Arday ah, hase ahaatee wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka tirsanaa Ciidamada Nabad sugida dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Horjoogiyaal ka tirsan Kooxda AL Shabaab oo ka hadlay dilkaasi ayaa waxa ay sheegeen in dilka Ninka loo gaystay uu ahaa Taliyihii Ciidamada Nabad sugida Degmada Shibis ee Magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay in dilka ay fuliyeen 4 Ruux oo hubaysan.
Dilkaani ayaa waxa uu qeyb ka yahay dilalka qorsheysan ee ka dhaca Magaalada Muqdisho oo dowladda KMG wax ka qabashadeeda aysan ku guulaysan.